mairie-antananarivo – FANOMEZANA MARIM-PAKASITRAHANA KAOMININA ANTANANARIVO RENIVOHITRA
auteur 25 septambra 2017 Commentaires fermés
Tonga nanotrona sy nanome fankasitrahana an’ireo mpiasan’ny Kaominina Antananarivo izay nandray anjara tamin’ny fifaninana Baolina Basket sy ireo vehivavy nanao fifaninanana Feo manga tamin’ny 8 martsa 2017 andiany voalohany ny Ben’ny Tanana Lalao RAVALOMANANA sy ireo mpiaramiasa aminy ny zoma 22 septembra 2017 tetsy amin’ny Kianja.
Araka izany dia nisy fanomezana amboara sy medaly ho an’ireo ekipa tafakatra . Voalohany ny ekipan’ny Mpanolontsaina Monisipaly , ny faharoa kosa dia ny avy ao amin’ny Boriboritany faha enina. Teo koa ireo tafakatra “grande finale” izay lasan’ny “Direction de Développement et Urbanisme” ny amboara, resiny tamin’ny isa 65 noho 53 ny Boriboritany faha efatra. Tsy vitan’izay ihany fa nanome baolina sy maillot ny ekipan’ny USCAFOOT ny Ben’ny Tanana mba ho fanampiana azy ireo; Ary marihana fa tafakatra amin’ny ampahavalondalana amin’ny THB Coupe de Madagascar ity ekipa ity etsy amin’ny kianjan’I Mahamasina
Nisy ihany koa ireo fanomezana marim-pakasitrahana an’ireo vehivavy nifaninana tamin’ny fifaninanan-kira “ Feo manga andiany voalohany” tamin’ny 8 Martsa fetin’ny vehivavy 2017.Vehivavy 7 no nifanitsana tamin’ny fifaninana farany ka ny voalohany dia nahazo milina fanjairana sy “four élèctrique”, ny faharoa kosa nahazo milina fanjairana sy “rice cooker” , ny fahaleo kosa dia nomena milina fanjairana miampy fera fimpasohana ary ny ambiny kosa dia notolorana famataranandro.
Nomena marim-pakasitrahana ihany koa ireo mpitsara ny feo manga izay miisa 4 avy ato amin’ny kaominina3 ary ny iray avy any ivelany.
Nankasitraka ireo mpandray anjara rehetra ny Ben’ny tanana Lalao RAVALOMANANA amin’ny fanatanterahana tamin’ny hetsika ary nambarany ihany koa fa fotoana natao ho firariantsoa sy fankaherezana itony hetsika itony sady ifampitaizana ny sain’ny mpiasa sy ny vatana .Nohamafisiny koa fa tokony hiray hina sy hifanampy foana isika .
Araka ny voalazan’ny Talen’ny kolontsaina sy ny fanatanjahatena Ramihone Patrick Angelo Andriamisa eo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra dia tsy hijanonana amin’ny taranja basketyny hetsika amin’ny manaraka fa hihitatra amin’ny taranja hafa.